QARIXII SOOBBE IYO QUDHAYDA!!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada QARIXII SOOBBE IYO QUDHAYDA!!!
QARIXII SOOBBE IYO QUDHAYDA!!!
(Hadalsame) 14 Okt 2019 – Tani waa sheeko mar haddii aad wariso, mar labaad aan ku celis lahayn, nooceeda oo kale wali goob-joog uma noqon, Eebbana dib iima tuso. Waa balliyo dhiig ah iyo bulsho idil oo la isu-wada-dhab-galiyey, dhawaaqeedu waa taah, gurmadkeedu waa dhiig, samirkeedu waa mawd!!!
Laba maalmood oo qarracan ah kaddib, waxaan goostay in aan Nairobi gaadho, bal kaalay adigu Garoonka Diyaaradaha gaadh! Waddo walba waa go’antahay, waxaa la baadi-goobayaa cadawgii qaraxa gaystay. Deegaanka Afisyooni ayaan ka wareegnay si aan dhabarka danbbe Garoonka uga galnno, Waxaan ku soo baxnay Bar-Ciidan oo mashquul badan, waxaa naga horeeya laba gaadhi oo Iskarogo/Qallaabi ah oo urta ka soo baxaysa aan dhibsannay, ugu yaraan khashin bay sideen baan is nidhi.
Askarigii wuxuu durba amar nagu siiyey in aan dib u laabanno, wariyaha Abdikadar Abdullahi Mohamed oo ila socday ayaa askarigii si deggan oo xushmad leh ugu qanciyey in uu birta naga qaado, waase in aan sugnaa inta ay na dhaafayaan Iska-rogooyinku.
Qarixii Soobbe, wuxuu ahaa dhul gariir nacayb aadame.
Waxaa Qoray: Cabdirashiid Maxamed Xaashi
Previous articleDIGNIIN: Dadka iska dhigaya inay dowladda ka socdaan oo dadka ILMAHA ka qaadanaya oo Maraykanka ka dillaacay! (Qiso dhacday)
Next articleDhacdadii 14-kii Oktoobar oo Laba Gu’ Jirsatay